AUKEY Waxay Soo Bandhigtay Shan Chargers Oo Cusub Kuwaas Oo Lagu Ogaanayo Dynamic Detect | Wararka Gadget
AUKEY waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee lagu yaqaan xeedho ama qaybta baytariga. Waxay leeyihiin xeedho badan oo kala duwan, oo loogu talagalay inay noqdaan kuwo waxtar badan oo ku soo dallaca qalabkayaga habka ugu raaxada badan ee suurtogalka ah. Shirkaddu waxay hadda soo bandhigeysaa noocyo kala duwan oo xeedho xayeysiis ah, oo loogu talagalay in loogu isticmaalo mobilada ama laptop-ka
Wadar ahaan shan xeedho oo cusub ayaa lagu soo qaatay qaybtan 'AUKEY'. Dhamaantood adeegso tikniyoolajiyadda Dynamic Detect. Waad ku mahadsan tahay, waxaa la ogaadaa marka uu jiro qalab ku xiran ama marka ay jiraan labo, taasoo u oggolaaneysa awoodda xeedho in ay wadaagaan labada. Sidaas ayaa lacag wax ku ool ah loo helaa.
1 AUKEY USB C Khadka xaraashka leh Dynamic Detect
2 AUKEY USB C Charger oo wata Power Delivery 3.0 & Dynamic Detect
3 AUKEY USB C Xeedho 60W
4 AUKEY USB C Xeedho leh GAN
5 AUKEY USB C Xeedho 60W
AUKEY USB C Khadka xaraashka leh Dynamic Detect
Qaabka ugu horeeya waa xeedho darbigan sumadda leh, taasi waxay u oggolaaneysaa xamuul dhan 30W. Waxaa loo isticmaali doonaa taleefoonno laptops ama laptops la socon kara. Xeedho Tani waxay leedahay oo leh USB-ga caadiga ah iyo Bixinta Awood-bixinta 3.0 ee soo-saarista qalabka USB-C iyo USB. Intaa waxaa dheer, waxaan isticmaali karnaa labada dekedood isla waqtigaas, annagoo u oggolaaneyna xitaa kiiskan in qalab lagu soo oogay awoodda 18W.
Thanks iyada waa suurtagal in lagu raaxeysto lacag degdeg ah oo hufan. Intaa waxaa dheer, waxay ku habboon tahay xulasho ballaaran oo taleefannada gacanta ah oo suuqa ku jira. Xeedho AUKEY tani waa caato ah, iftiin iyo xeedho is haysta, taas oo aan ku isticmaali karno guriga, laakiin sidoo kale aan ku qaadano fasax waqti kasta. Si fudud loo raro
Xeedho AUKEY-kan ayaa noqon kara ku iibso qiimo dhan 30,99 euro on Amazon, Wax alaab ah lama helin..
AUKEY USB C Charger oo wata Power Delivery 3.0 & Dynamic Detect
Xeedho labaad ayaa la mid ah qaabkii hore. Xaaladdan oo kale waxay leedahay laba dekedood oo USB-C ah, taas oo noo oggolaan doonta inaan lacag ka qaadno dhammaan noocyada qalabka, sida taleefannada. Faa'iido kale ayaa ah in ay la jaan qaadi karto taleefano aad u tiro badan, laga bilaabo moodooyinka Android illaa moodooyinka iPhone. Xeedho qaas ah waxay na siineysaa awood dhan 36W.
Isla mahadsanid waxaan ka qaadi karnaa laba qalab isla waqti isku mid ah, taas oo ka dhigi doonta awoodda 18W kiiskan. Weli waa ikhtiyaar weyn in si dhakhso leh qalab looga qaado. Intaas waxaa sii dheer, annagoo yar oo miisaan yar, markasta waan qaadan karnaa, ama aan ku shaqeyn karno ama aan ku safri karno. Aad ugu raaxeysan arrintan.
Moodelkan noocyada cusub ee fiilooyinka AUKEY, waan awoodnaa Wax alaab ah lama helin..
AUKEY USB C Xeedho 60W
Xeedho saddexaad ee qaybtan cusub ka socota AUKEY waa awood badan Xeedho USB. Waxay ku timaaddaa soosaarka caadiga ah ee USB iyo Soo-dejinta Awoodda 3.0 waxaana loogu talagalay in lagu dalaco qalabka USB-C iyo USB si hufan. Xeedhohan waxaan ku heli karnaa lacag 60W ah, oo loo isticmaali karo dekedda USB-C mar walba. Xaaladda rabitaanka in aan ka qaadno laba aaladood isla waqti isku mid ah, waan isticmaali karnaa 45W ee Bixinta Awoodda marka aad isticmaaleyso labada dekedoodba isla waqtigaas.
Waa a is haysta, miisaan fudud oo aad u fudud in la isticmaalo moodel, sida aan ku aragno noocyadan kala duwan ee shirkadda. Waxay u ogolaaneysaa in marwalba la geeyo meel kasta oo aan dooneyno. Sidoo kale, xeedho this Waxay leedahay isku xiraha isku laalaada oo siiya faa iidadiisa iyo marin u helideeda. Faa'iido u leh lacag-bixinta guriga, xafiiska ama socdaalka.
Waxaan hadda ka iibsan karnaa Amazon, Wax alaab ah lama helin., qiimihiisu waa 49,99 Yuuro.
AUKEY USB C Xeedho leh GAN
Qalabka xaraashka afraad ee ka mid ah noocyadan 'AUKEY' ayaa u muuqda adeegsiga la tikniyoolajiyadda GaN ee horumarsan. Tiknoolajiyaddani waa waxa u oggolaanaya helitaanka lacag aad u dhakhso badan. Marka waxaa loo isticmaali karaa moodello badan sida MacBook Pro, iPhone XS, XS Max, XR, Nintendo Switch ama aalado kale oo la jaan qaadaya USB-C.
Xeedho-xoqani waxay ina siineysaa helitaanka lacag-bixintaan degdegga ah, oo leh 60W awood ah, laakiin aan lahayn cabbir ka ballaaran. Marwalba waxay haysaa naqshad aad u kooban. Waad ku qaadan kartaa meel kasta, boorso, shandad ama shandad. Intaa waxaa sii dheer, waxaa loo qaabeeyey hab ka hortagaya aaladaha inay sawir aad u tiro badan muujiyaan ama ka hortagaan inay kululaadaan inta lagu jiro amarka.
Qiimaheeda badanaa qiimo dhan 42,99 euro. Inkasta oo si kumeelgaar ah looga iibsan karo Amazon kaliya 34,99 euro, Wax alaab ah lama helin..
Xeedhohan shanaad waa suurtagal qaabka ugu sareeya ee kaladuwan ee ka socda AUKEY. Waa xeedho awood u leh 60W, sidoo kalena leh laba dekedood oo USB-C ah. Marka waxaan ka qaadi karnaa laba aaladood oo is waafajin kara isla waqti isku mid ah, ha noqdaan taleefanno ama laptop-yo. Faa'iidada weyn ee ay na siiso ayaa ah inaan ka qaadi karno laptop iyo taleefan isla waqtigaas, laakiin iyada oo aan midkoodna la saameyn ama aan si tartiib ah u soo dallacno
Naqshadeynta is haysta in aan ku aragno qaddarkan wali waa ku dhex jiraa. Marka waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar weyn markaad safar la galayso. Iftiin, yar yar oo xoog badan. Ka sokow inaad aad u ammaan tahay, iska ilaalinta kuleylka ama xad-dhaafka hadda.
Xeedho Tani waxaa lagu heli karaa qiimo dhan 59,99 euro on Amazon, Wax alaab ah lama helin..
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Gargaarka » AUKEY waxay soo bandhigeysaa shan xeedho oo xeel dheer oo mobilada iyo laptop-ka ah